राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङको तयारी पूरा – Khel Dainik
राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङको तयारी पूरा
चैत्र २७, २०७७ | (PostaComment)
रुप कार्की स्मृति प्रथम नेपाल्स स्ट्रोङगेष्ट राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङमा सहभागी खेलाडी नियम बारे जानकारी गराइदै ।
काठमाडौं (खेलदैनिक) । नेपाल पावर लिफ्टिङ संघको आयोजनामा हुने रुप कार्की स्मृति प्रथम नेपाल्स स्ट्रोङगेष्ट राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङको तयारी पूरा भएको आयोजक कमिटीका सचिव सुरेश सुवेदीले जनाएको छन् ।
प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा शनिबार हुँदैछ । प्रतियोगितामा ७३ पुरुष र २८ महिला गरी जम्मा १ सय १ खेलाडीको सहभागिता रहने छ । शुक्रबार खेलाडीको वजन लिनुका साथै खेलाडीलाई नियमका बारेमा पनि जानकारी गराइएको जजेज कमिटीका संयोजक बुद्धि कार्कीले जानकारी गराए ।
पुरुषतर्फ ६, महिलामा २ र पुरुष मास्टर्समा २ गरी जम्मा १० स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने छ । हरेक स्पर्धामा शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने खेलाडीले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र ३ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।
पुरुष र महिलातर्फ प्रत्येक स्पर्धामा पहिलो हुने खेलाडीबीच पुनः प्रतिस्पर्धा गराइ ओभरअल च्याम्पियन पनि घोषणा गरिने छ । त्यसको विजेताले छुट्टै जनही ५१ हजार नगद पुरस्कार हात पार्ने छन् ।
अमेरिकामा बस्दै आएका पावर लिफ्टिङका मास्टर्सतर्फका दुई पटकका विश्व च्याम्पियन स्व. कार्कीको स्मृतिमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो । स्मरण रहोस, केहि महिनाअघि उनको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो ।
← बिराट गोल्डकपमा बिराटनगरको विजयी शुरुवात पञ्जाब बिराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा →
हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर चैत्र २७, २०७७
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा चैत्र २७, २०७७
मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर चैत्र २७, २०७७
दीप ज्योतीलाई जिल्ला लिगको उपाधि चैत्र २७, २०७७
रशिला बिश्व वरियताको ७ औं स्थानमा चैत्र २७, २०७७
नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने चैत्र २७, २०७७